HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ARBACO 12-KA JUUN 21019-KA
Wednesday June 12, 2019 - 10:43:57 in Wararka by Mogadishu Times
FARMAAJO OO LA KULMAY ERGAYGA GAARKA AH EE MIDOWGA YURUB U QAABILSAN GEESKA AFRIKA Madaxweynaha JFS Md. Maxamed C/hi Farmaajo ayaa Madaxtoo yada ku qa abilay Ergayga Gaarka ah ee Midowga Yu rub u qaabilsan dalalka Gee ska Afrika Md. Alexande
FARMAAJO OO LA KULMAY ERGAYGA GAARKA AH EE MIDOWGA YURUB U QAABILSAN GEESKA AFRIKA Madaxweynaha JFS Md. Maxamed C/hi Farmaajo ayaa Madaxtoo yada ku qa abilay Ergayga Gaarka ah ee Midowga Yu rub u qaabilsan dalalka Gee ska Afrika Md. Alexander George Ron dos oo uu we heliyo Danjiraha M/Yurub ee Soom aaliya Mudane Nicolás Be rlanga Mart inez. Madaxweynaha iyo Danjiraha ayaa ka wada hadlay xooj inta taageera da M/Yurub ee Soom aaliya, gaar ahaan dhinacyada amni ga, dhaqaalaha, deyn cafinta, iyo dib u habaynta garsoorka dalka. Madaxweyne Farmaajo iyo Danjire Ro ndos ayaa sidoo kale iska xogwareystay xaaladda Gobolka iyo dadaallada lagu xo ojinayo iskaashiga ku aaddan arrimaha amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee u dhexeeya dalalka Geeska. Agaasimaha Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta Madaxtooyada Md. Cabdin uur Maxamed Axmed ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu la wadaagay Danjira ha aragtida DFS ee ku saleysan daris wan aagga dalalka Gobolka, iskaashiga, xaqiij inta nabadda iyo horumarka Geska Afrika. "Madaxweynaha ayaa uga warbixiyey Wafdiga Midowga Yurub dadaallada ku sa absan xaqiijinta amniga oo ay ugu horreey aan dhismaha Ciidamada Qalabka Sida. Sidoo kale wax ay ka wada hadleen arri maha deyn cafinta oo Midowga Yurub uu kaalin mug leh ka qaato." Dhankiisa, Danjire Alexander Rondos ayaa uga mahad celiyey Madaxda Dowlad da FS soo dhaweynta wanaagsan ee ay u fidiyeen isaga iyo wafdigiisa, waxa uuna sheegay in ay ku gacan siinayaan Dowlad da sugidda amniga iyo dib u habeynta ca ddaaladda oo tiir dhexaad u ah qorshe hawleedka Xukuumadda.
MAXAA LOOGA HADLAY SHIRKA HORUMARIN TA MUQDISHO?
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ah na duqa M/Muqdisho Md. Cab diraxmaan Cumar Cusmaan (Eng: Yariisoow) waxa uu da ahfuray shirka wadata shiga ee qor shaha hor umarinta gobolka Bana adir iyo dowlada hoose Xamar waxaana madasha uu shirkani ka dhacayay goob jo og ka ahaay wasiiro katirsan Dowlada So omaali ya, agaasimayaasha guud ee was aarada ha xukuumada Soomaaliya, guddoomiye kuxigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir iyo xo g’hayaha guud ee maamulka Gobolka Ba naadir.Shirkani oo dhowr sac kaa qaatay ayaa madaxdii ka qeyb gashay waxa ay aragti kala duwan kaga doodeen qor sha yaasha kala duwan oo ay dowlada hoose Xamar u diyaarisay in lagu horumariyo ca asimadda Jamhuuriyada federaalka Soo maaliya sanadaha dhow ee soo socda iyo sida ku haboon dhaqangalinta qorshahani madaama hadafku yahay in magaalada Muqdisho ay soo ceshato maqaabkii iyo burjigii ay caalamka ku laheyd iyo in mag aaladu la tartanto magaalooyinka dhige eda ah.
Guddoomiye Yariisoow ayaa gabagab ada shirkani si guud ugu warbixiyay shirka qorshaha horumarinta gobolka Banaadir iyo dowlada hoose Xamar
MADAXWEYNE KU XIGEENKA PUNTLAND OO GAARAY DEGAANKA AFURUR
Madaxweyne ku xigeenka Puntland isla markaana ah Kusim aha Madaxwe ynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa gaaray degaanka Afurur ee Gobolka Bari.
Md.Karaash ayaa ho gaaminaayey wafdi ay ka mid ahayeen Wasiir ka Amniga Gallan, wasiirka Xannaanada Xoolaha Siciid Fiisigis, Taliyaha Booliska, Xubno ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Daraawiishta iyo Madax ka tirsan Mada xtooyada.
Wafdiga ayaa kulama la qaatay Ciida mada iyo Bulshada ku dhaqan degaan ka as. Ka dib markii laga saaray ciimadii al shabaab ee dhawaan qabsadeen
Waxaa M/Magaalada Cape Town ee da lka koonfur Afrika ay kooxo Burcad ah saa kay ku dileen muwa adin Somaaliye ed oo ka mid ahaa Soomaa lida Ganacsi ahaan u tagtay dalkaas.
Kooxda Burcad ah ayaa muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Macalin Cabdulaahi Cali Ciise ay ugu tag een Goobtiisa Ganacsi oo ku taalla Xaaf adda Zola oo ka tirsan Strand – Cape To wn ee dalkaasi Koonfur Afrika.
Mid ka mid ah Ganacsatada Soomaa liyeed ee ku nool dalkaasi Koonfur Afrika oo lagu Magacaabo Cabdullaahi Muuse ayaa sheegay in Kooxda Burcada ah ay muwaadinka dhowr xabadood ku dhufteen intaasi kadibna ay qaateen lacago iyo ag ab kale ee yaallay Goobtiisa Ganacsi. Dhinaca kale Habeem hore ayaa Koox Burcad ah waxaa ay rasaas ku dhaawaceen Mu waadin Soomaaliyeed oo ka mid ah Dara walada Taxisda,waxaaan dhaawiciisa la geeyay Isbitaalka Tygerberg ee Maga alada Cape Town.
Inta badan dillalka ka dhaca Koonfur Afrika ayaa waxaa loo geystaa Soomaal ida ku nool dalkaasi, kuwaasi oo ganacsi yo kala duwan leh, dableyda dilalka geys ata ayaanan inta badan suuragelin in gac anta lagu soo dhigo.
SOOMAALIYA OO KA QEYB GASHAY SHIRKA GOLAHA SARE EE GARSOORKA AFRIKA
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka, Baashe Yuusuf Axmed, ayaa magaalada Luan da ee dalka Ango la uga qayb galaya shirkii 5aad Gola ha Sa re ee Gars oor ka Afrika oo ay So omaaliya xubin bu uxda ka tahay.
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Ang ola, H.E Joã Manuel Gonçalves Louren ceç, ayaa furay shirkaan oo ay kasoo qa yb galeen mas’uuliyiin ka socota garsoor ka wadamada qaaradda Afrika.
Shirka oo Dorraad furmay Shalayna soo xirmaya ayaa looga hadlay dhawrista dastuurka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee Aadamaha iyo kaalinta Garsoorka.
DAD LAGU XIRAY KONTEENER AY LEEYIHIIN CIIDAMADA JABUUTI
Ciidamada Jabuuti ee qeybta ka how lgal AMISOM ee Soomaaliya ee ku sugan Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ay aa dad shacab ah waxaa ay ku xireen Konteener ay leeyihiin.
Dadka la xiray ayaa Ciidamada Jabuuti waxaa ay ku qabteen howlgal ay ka same eyeen duleedka Jalalaqsi,kadib markii weerar khasaaro geystay Alshabaab ay ku qaadeen Saldhig ku lahaayeen duleed ka degmadaas. Howlgalka dadkii lagu qa btay ayaa ius ugu jira Culimo u fadhiday Alle Bari iyo dhalinyaro badan,kuwasi oo ka mid ahaa dadka deegaanka Degma da,isla markaa na lagu xiray Konteener ay leeyihiin Ciid amada Jabuuti.
Cabdi Duurow oo ah Xildhibaan ka tir san dowlad Goboleedka Hirshabeelle ee ka soo jeeda Jalalaqsi oo la hadlay Radio Dalsan ayaa u sheegay in xiriiro badan uu la sameeyay maamulka Gobolka iyo kan degmada,kuwaasi oo xusay inay wadaan dadaalo lagu sii daynayo dadkaas.
Sababta loo xiray dadkaas ayuu ku she egay Xildhibaan Duurow inay tahay,kadib weerarkii habeeno ka hor ka dhacay Degmadaas,isla markaana ay ku qaadeen Alshabaab,kaasi oo khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray Cii damo Jabuutiyaan ah oo Saldhig ku lahaa duleedka Degmada Jalalaqsi ee Gobolka
GUDDOOMIYE MUUDEY OO LAGU SOO DHAWEEYAY MAGAALADA MUQDISHO
Magaalada Muqdisho ayaa Shalay waxaa dib ugu soo laabtay Guddoo mi ye kuxigeenka 1a ad ee Golaha Shac ab ka Baarlamaan ka Soomaaliya Cabdiweli Sh. Ibraahim Mu uddey oo maalmihii la soo dhaafay ku ma qnaa dalka dibadiisa gaar ahaan Turkiga.
Guddoomiye Muuddey ayaa markii soo gaaray Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho waxaa kusoo dhawe eyay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda.
Intaasi ka dib ayuu Md. Cabdiweli Sh. Ibraahim Muudey oo si kooban warbaah inta ula hadlay waxaana uu ka mahad cel iyay soo dhaweeynta ballaaran ee Shalay loo soo dhaweeyay,isla markaana waxa uu ka warbixiyay socdaalkii uu ku joogay dalka Turkiga.
Md. Muuddeey ayaa dalka Turkiga aa day,ka dib markii uu soo xiray Fadhigii u gu dambeeyay Golaha Shacabka,kaasi oo Xildhibaanada Golaha Shacabka Fasax ay ugu galeen 10kii dambo ee Bishii Ram adaan iyo maalmihii la soo dhaafay ee Ciidul Fitriga.
WEERAR KA DHACAY DULEEDKA AFGOOYE IYO KHASAARO KA DHASHAY
Warar dheeraad ah ayaa ka soo bax aya kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday fariisimo Ciidamada dowladda ay ku lahaa yeen duleedka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeella ha Hoose.
Weerarka ayaa wax aa la sheegay in uu ka dhashay Khasaaro nafeed oo soo ga aray Ciidamadii la weeraray xili ay ku sug naayeen duleedka Afgooye,isla markaana ay geysteen rag hubeysan.
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay weerarka,kaasi ka tirsanaa Ciidanka dow ladda,isla markaana waxaa goobta ka baxsatay kooxdii weerarka soo qaaday.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku dara yaan in askariga la dilay horey looga sii qa atay Qoray Ak47 oo watay.
War qoraal ah oo lagu daabacay ba raha Alshabaab Internetka ay ku leeyihi in ayaa ay ku sheegteen Mas’uuliyadda weerarkii ka dhacay duleedka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoona sheegtay inay halkaasi ku dileen Askari ka tirsan Ciidamada dowladda.
Degmada Afgooye ayaa waxaa marar ka qaarkood ka dhaca dilal qorsheysan oo loo geysto Askarta Ciidamada dowladda Federaalka iyo dad shacab ah,waxaana Mas’uuliyadooda sheegta Alshabaab.
CIIDAMO KA GOOSTAY SOOMAALILAND OO GAARAY GOBOLKA SANAAG
Ciidamadaan oo aan weli tiradooda la shaacin ayaa ahaa jabhad hubeysan oo ta ageerta Soomaaliland,waxaana la sheeg ay inay kasoo tageen deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag,isla markaana lagu soo dhaweeyey deegaano ka tirsan Gobolka Sool.
Ciidamadaas oo wata gaadiidka daga alka ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan inuu Aas’aasay Boqor Buur Madow oo ka mid ah Salaadiinta Soomaa liland,waxaana Ciidamadaas oo dhaweyn qeybo ka mid ah Gobolka Sool ugu sa meeyay Odayaasha iyo waxgaradka Gob olkaas.
Qaar ka mid ah Saraakiisha hoggaam ineysa Ciidamada kasoo goostay Soomaa liland ayaa waxaa ay ku hanjabeen inay ladagaalami doonaan Maamulka Soom aaliland ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Waa jabhadii 2aad ee kasoo baxda cii damada Soomaaliland,iyada oo horay ay Soomaaliland uga soo baxeen Jabhadda uu hoggaamiyo Korneel Caare,kuwaas oo sheegaya inay dagaal adag la geli doon aan Soomnaaliland.
KULAN AMNIGA LOOGA HADLAY OO HABEEM HORE KA DHACAY MUQDISHO
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cu smaan (Eng. Yariisow) ayaa Habeem hore shir gu ddoomiyay kulan looga hadlayay Amniga Caasimadda kaas oo lagu qabtay xarunta Guud ee qeybta Booliska.
Guddoomiye Yariisow ayaa waxaa uu sheegay in Shirka amniga Caasimadda la gu qiimeeyay xaalada Guud ka dib korm eer iyo dabagal joogta ah oo la waday muddo. Sidoo kale inta uu Shirka socday ayaa waxaa lagu Go’aamiyay dib u eegis in la gu sameeyo Qorshaha Sugida Amniga Ca as imada.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirkuxigeenka Amniga XFS Cabdina sir Siciid Muuse,Taliyaha Ciidanka Boo liska Soomaaliyeed S/guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko,Guddoomiye kuxige enka Amniga Gobolka Banaadir iyo Sara akiil ka tirsan Booliska.
MAAMULKA HIRSHABEELLE OO WAR KASOO SAARAY DAGAALKA DULEEDKA BALADWEYNE
Khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay dagaal deegaanka Kal abeyr ee Gobolka Hiiraan ku dhexmaray Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Maamu lka HirShabeelle iyo Ciidamo taabacsan Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Gob olkaasi Yuusuf dabageed.
Dadka dagaalkaas ku geeriyooday ay aa waxaa ka mid ah tali yihii qeybta Boo liska gob olka Hiiraan Gaashaanle Dhexe Maxamed Mocow,waxaana ku dhaawa cmay atliye kuxigeenka ciidanka Booliska Baladweyne.
Afhayeenka Maamulka HirShabelle Daa’uud Xaaji ciro ayaa marka hore u tac siyadeeyay dadkii ku dhintay dagaalkaas gaar ahaan taliyihii qeybta Booliska gobol ka Hiiraan Gaashaanle Dhexe Maxamed Mocow.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa sheegay inay baaritaan dahb ah ku sameynayaan cid alaala cidii ku lug yeelata tallaabo Sha ci ah laga qaadi doono.
Dowlada HirShabeelle waxay Baarita an Cad ku sameeysaneysa Qaabka uu u dhacay Falkaasi Cid Walba oo Falkaas ku lug yeelatana Waxay ka qaadaysa Tallaa bo Sharciga Waafaqsan.Sharciga Ayaa Cidwalba ka sareeyo ayuu yiri Afhayeen ka Maamulka HirShabe lle. Dag aalka Ma anta ka dhacay deegaanka Kalabeyr ee duleedka Baladweyne ayaa wa xaa uu salka ku hayay xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay Guddoomiy ihii G/Hiiraan Yuusuf Dabageed bal se uu diiday.
MADAXWEYNE XAAF OO LA KULMAY WAFDI KA SOCDAY QM
Wafdi ka tiran QM oo isugu jira madax iyo farsamoyaqaano ayaa manata gaaray M/Dhusamareeb ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug.
Socdaalkooda ayaa la xiriiray sahminta goobta loo diyaarinayo iney dagaan hay’ adaha QM oo dhawaan si rasmi uga furan doona Magaalada Dhusamareeb.
Ugu danbeyntii wafdigu waxay xarunta Magadaxtooyada kulan isfaham ku idlaaday kula qaateen Madaxweyne Xa af , iyaga oo si nabad ah uga soo amaba baxay magaalada Dhusamareeb.
DIYAARADO DRONE AH OO WEERARAY SACU UDIGA
Ciidamada difaaca hawada Sacuudiga ayaa Shalay sheegay inay qabteen 2 diy aarad oo drone ah oo ay kusoo weerare en Xuutiyiinta dalka Yemen, sida ay weris ay wabahainta dow ladda,xilli malee shi yadan shiicada ah ay kordhiyeen wee ra rada ka dhan ah boqortooy ada.
Diyaaradahan ayaa beegsaday maga alada Khamis Mushait ee koonfurta dalka Sacuudiga, hase yeeshee ma sababin wa xkhasaare nafeed ah ama waxyeelo, sida lagu sheegay bayaan ay baahisay wa ka laadda wararka Sacuudiga ee SPA, oo ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka Yemen.
Xuutiyiinta ayaa taleefishinkooda AlMasirah ka sheegtay inay beegsadeen sal dhigga ciidmada cirka ee King Khalid ee magaalada Khamis Mushait.
Weerarkan ayaa yimid xilli ay wakaala dda warraka SPA werisay in isbahaysiga Sacuudiga ay kordhiyeen weerarada cirka ee lala beegsanayo goobaha Xuutiyiinta ee gobolka Hajjah ee waqooyiga Yemen.